चर्मरोग | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » डक्टर्स आर्टिकल » "चर्मरोग" शरीर चिलायो ? मानिसको शरीर बाहिरी र भित्री गरी दुईवटा कारणले चिलाउँछ । भित्री कारणमा रगतको खराबीले गर्दा धेरै चिलाउने समस्या उत्पन्न भएको हुनसक्छ । त्यसैगरी कलेजो, मिर्गौला र थाइराइड आदिको समस्याका कारण पनि शरीर चिलाउने समस्या देखा पर्नसक्छ । कसैकसैलाई जन्डिसको समस्यामा पनि शरीर अत्याधिक चिलाउने हुन्छ । बाहिरी कारणमा जाडो मौसममा शरीर सुख्खा भई चिलाउने [...]
त्यसैले खुइलिन्छ तालु तालु खुइलिएका बिषयमा हाम्रो समाजमा अनेकौं किस्सा सुन्न पाइन्छन् । कतिपयले तालु खुइलिनुलाई बुद्धि र विवेकको क्षमतासँग पनि दाँज्ने गरेका छन् । तर, यो वास्तविकता होइन । तालु खुइलिनु पनि एउटा रोग नै हो । खासमा तालु २ प्रकारले खुइलिन्छ । सिकाट्राइसियल र नन–सिकाट्राइसियल । सिकाट्राइसियलमा जन्मजात समस्या, सुन्निएको अवस्था, कोठी , चोटपटक वा क्यान्सरका [...]
शरीरमा मुसा किन आउँछ ? मुसालाई अंग्रेजीमा वाट्स भनिन्छ । मुसा ह्युमन पेपिलोमा भन्ने भाइरसबाट हुने खटिरा वा विविरा हो । यो बच्चादेखि वृद्धालाई समेत पनि आउन सक्छ । यसलाई समाजमा सामान्य रुपमा लिइन्छ । मानिसको सोच नै मुसा आफैं ठिक भएर जान्छ भन्ने छ । तर यो ४० प्रतिशत मात्र आफैं ठिक भएर जान्छ । ४० प्रतिशतमध्ये पनि [...]
डन्डीफोर रोग भन्दा सौन्दर्य समस्या - डा. अनिलकुमार झा, चर्मरोग बिशेषज्ञ / सामान्यतः डन्डीफोरलाई रोग भन्दा पनि सौन्दर्य समस्या तथा उमेर खटिराको रुपमा लिइन्छ । डन्डीफोर उमेरका कारण मात्र नभई अन्य धेरै कारण हुन्छ । प्रायः १५ देखी २५ वर्ष सम्ममा डन्डीफोर आउने गर्दछ तर वातावरणीय प्रदुषणको कारणले गर्दा सानै उमेरमा पनि डन्डीफोर आउन सक्छ । डन्डीफोर आउने अर्कोे कारणमा [...]